Ngomlando-mlando waseRoma uLiby
Umlando nomlando wakhe wokuziphatha waseRoma
Igama: Titus Livius okanye uLiyy, ngesiNgesi
Imihla: 59 BC - AD 17
Indawo yokuzalwa: iPatavium (ePadua), iCisalpine Gaul
Intsapho: Engaziwayo, ubuncinane bodwa umntwana, unyana
Umsebenzi : Umlando
I-Romantic annary [ngonyaka-ngonyaka] umlando weThith Livius (uLiyyy), wasePatavium (ePadua, njengoko kuthiwa ngesiNgesi), indawo yaseItaly apho uStkespeare ukuLungisa kweSikhrew kwenzeka khona, wayehlala malunga neminyaka engama-76, ukusuka . 59 BC
c. I-AD 17. Oku kukhangeleka kangangokude ukugqiba i- magnum opus , i- Urbe Condita 'ukusuka ekusekweni kweSixeko', oku kufaniswa nokushicilela incwadi enye yamaphepha angama-300 ngamnye ngonyaka iminyaka engama-40.
Ininzi yeencwadi zika-Livy eziyi-142 kwiminyaka engama-770 yembali yaseRoma zilahlekile, kodwa ezingama-35 zisinda: ix, xxi-xlv.
Ulwahlulo lwe- Urbe Condita
Iziqulatho ze- Ur Ur Condita Libri I-XLV
IV : Ukuqala kwi-Gallic ngxowa yaseRoma
VI-XV : Ukuqala kweeParic War
XVI-XX : Imfazwe yokuqala yeParic
I-XXI-XXX : iMfazwe yesiBini yePunic
I-XXXI-XLV : Imfazwe yaseMacedonia neSyria
Emva kokunikezelwa ngeminyaka engama-365 yembali yaseRoma kwiincwadi ezintlanu kuphela (ubuncinane ~ iminyaka engama-73 / incwadi), uLiby uhlanganisa yonke imbali kwisantya seminyaka emihlanu ngeencwadi.
Nangona silahlekile isahlulo sangomhla kwimbali yakhe, kubonakala kungesizathu sokukholelwa ukuba i-Livy's Ab Urbe Condita ibhaliwe njengengxelo esemthethweni yaseAgasan, ngaphandle kwento yokuba wayengumhlobo ka-Agasti, kwaye loo migaqo ibalulekile kubo bobabini madoda.
Nangona isimo sikaLisy njengesiganeko esisemthethweni sikaAgasan siphikisana, uPaul J. Burton (olandelayo uTJ Luce, "Ukutshatyalaliswa kweLiyidine yokuqala yeLiby," iTAPA96 (1965)) iqala ukubhalwa kwembali kaLiby ngo-33 BC-ngaphambi kweMfazwe I-Actium kunye nomnyaka (27 BC) i- Octavian ngokuqhelekileyo ifanelekela njengomlawuli.
Indima kaLiby kwimbali yeencwadi kunye nendawo yokudlala - ebona iHighes kunye neHeroines of Fiction, nguWilliam Shepard Walsh - kunye nobugcisa obubonakalayo, ngokukodwa iBotelli, buza ubuncinci inxalenye yeendaba zikaLithy zokuziphatha zokuThatyathwa kweVirginia kunye Ukudlwengulwa kweLucretia.
Kwintetho yakhe, uLisy uhola umfundi ukuba afunde imbali yakhe njengendawo yokugcina imizekelo yokulingisa nokuphepha:
> Yintoni eyenza ukuba isifundo seembali sizuze kwaye sivelise oku, ukuba ubone izifundo zazo zonke iimeko ezifana nesikhumbuzo esaziwayo; ezi zinto unokuzikhethela ukuba ufanele uzixelise njani, kwaye umaka ukuphepha oko kukuhlazolayo ....
U-Livy uqondisa abafundi bakhe ukuba bahlolisise imilinganiselo nemigaqo yabanye ukuze bakwazi ukubona ukubaluleka kokugcina imigangatho yokuziphatha:
> Nazi imibuzo endiyifunayo ukuba ndiyifunde ngayo yonke imbali ukunika ingqwalasela yakhe emfutshane: yintoni ubomi kunye nokuziphatha okunjalo; ngoluphi umntu kunye nemiphi imigaqo-nkqubo, ngoxolo nakwiimfazwe, ubukhosi bubekwe kwaye bukhulisiwe. Emva koko makangqaphele ukuba, ngendlela yokuphucula ngokukhawuleza kokuziphatha, ukuziphatha kwangoku kuncedisa, njengokuba kunjalo, kwaza kwancipha ngaphantsi nangaphantsi, kwaye ekugqibeleni kwaqala ukuqhuma okuhlawuleyo okusilethe ixesha lethu langoku, xa singakwazi ukunyamezela zethu iimpazamo lwabo unyango.
Kulo mgaqo wokuziphatha, uLiby ubonisa zonke iintlanga ezingezona amaRoma njengeziphazamiso zengqungquthela ezihambelana neentsika zamaRoma:
> "iiGauls zinamandla kwaye zinamandla, kunye nokungabi namandla okuhlala; ngoxa amaGrike angcono ukuthetha kunokuba alwe, kwaye angenakuziphatha kakubi kwindlela abavakalelwa ngayo" [Usher, iphe. 176.]
I-Numidians nayo ingenangqondo ngenxa yokuba inqwenela kakhulu:
> "ngaphezu kwazo zonke izibhengezo iiNumidians zithandwa kakhulu"
I-sunt i-omt barbaros Numidae effusi kwi venerem. [Haley]
UkuVavanywa kweMbali kaLiby
Ngembali njengezithuthi zakhe, uLiby ubonisa indlela yakhe yokubhala kunye nesitayela. Uthatha ingqwalasela yabaphulaphuli abaphulaphuli ngeentetho okanye inkcazo yemoya. Ngezinye izikhathi i-Livy imihla ngemihla eyahlukahlukeneyo. Ngokungaqhelekanga uhlolisisa iziguquko eziphikisanayo zesiganeko kodwa ukhetha ngeliso lokunyusa amaqumrhu aseRoma.
U-Livy wavuma ukungabikho kwezi rekhodi ezibhaliweyo ezivela kuyo ukuqinisekisa ubungqina obuvela eRoma. Ngamanye amaxesha wayesebenzisa iincwadi zesiGrike ezisetyenziswayo. Ngaphandle kwemvelaphi kwimicimbi yempi okanye yezopolitiko, ukuthembeka kwakhe kule mimandla kuncinci. Nangona kunjalo, uLiyy unikeza iinkcukacha ezininzi ezingabonakaliyo kwenye indawo, kwaye ngoko ke, nguye umthombo obaluleke kakhulu kwimbali jikelele yeRoma ukuya kwithuba lokuphela kweRiphablikhi.
UStephen Usher, AbaBhishobi beGrisi neRoma
Umdumi Wokugqibela WeRephablikhi: Usuku Olutsha Lokwakhiwa Kwe-Penty's First Pentad "
UPaul J. Burton
Imbali: Zeitschrift für Alte Geschichte , Bd. 49, H. 4 (4th Qtr., 2000), iphe. 429-446.
"I-Livy, i-Passion, neNkcubeko"
Imbali: Zeitschrift für Alte Geschichte , Bd. 39, H. 3 (1990), iphe. 375-381
Abalingisi kunye nezihloko kwiMidlalo 'yamanzi ngeSpoonful'
Livia Drusilla - Impress waseRoma uJulia Augusta aka Livia
Top 10 Kanye West Iingoma
Indlela Yokuxelela Ukwahlukana Phakathi kwe-Bumblebee kunye neNyozi yeenkuni
Amagqabantshintshi amakhulu, iiNtetho kunye neziBhali zoMbutho weeLungelo loLuntu
Iimfuno ze-Barniest Barack Obama zoNyaka zonke